Ny vato opalina mavokely dia azo apetraka ho toy ny peratra, rojo, kavina, haba-tànana - horonan-tsary
Izahay dia manao firavaka manokana miaraka amin'ny vato opal mavokely toy ny peratra, kavina, rojo, haba na pendant. mazàna dia apetraka amin'ny volamena rose toy ny peratra fifamofoana ny opal mavokely.
Mividiana opal mavokely voajanahary ao amin'ny magazay
Ity vatosoa ity dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny Andes Mountains of Peru. Raha ny marina dia raisina ho toy ny fanomezana avy amin'i Pachamama, andriamanibavin'ny fahavoazana voalohany indrindra tany Inca izy ireo ary ny Reny Tany. Opal dia gel silika mihamafy, mazàna misy rano 5 ka hatramin'ny 10%. Noho izany dia tsy mikristy, tsy toy ny ankamaroan'ny vatosoa hafa.
Gravity manokana: 2.10 g / cc
Ny votoatin'ny rano: 3.20%
Ny marika Moh 5.5-6
Lafiny Holistic an'ny opal Peroviana
Araka ny fomban'ny vato Peroviana Peral dia vato mahamay izay afaka mampitony ny saina ary manamaivana ny olana momba ny torimaso. Ny fandriam-pahalemana miaraka amin'ny peroviana opal dia heverina fa hanasitrana ny fanaintainana tsy fantatry ny lasa.
Manana fahefana miala sasatra ny vato, ny lovantsofina dia milaza amintsika fa afaka manala ireo fihenjanana rehetra amin'ny serasera izany ary hamela ny hevitra hikoriana malalaka. Vato tena tsara izy io hampitoniana ny saina ary heverina ho ilaina amin'ny torimaso tsara.
Ity vato ity dia mifandraika amin'ny chakra ao am-po, ny angovo mifantoka amin'ny fiahiahiana sy ny fifandraisana. Voalaza fa io no vato mahery indrindra amin'ny vato fanasitranana rehetra. Izy io dia afaka mampitombo ny famoronana sy ny aingam-panahy, ny vato dia mifandray amin'ny vintana.
Ny dikan'ilay vato dia ny fanasitranana ara-panahy. Nankamamiana toy ny vatosoa fanasitranana lehibe izy io. Voalaza fa hamoaka ny fihenjanana ary hitondra fandriampahalemana. Ampirisihina ho an'ireo olona mirona amin'ny adin-tsaina sy ahiahy. Izy io dia afaka mamoaka karazana sorisory.
Opal mavokely, avy any Peroa
Izahay dia manao firavaka manokana miaraka amin'ny vato opal mavokely toy ny peratra, rojo, kavina, haba na pendant. mazàna dia apetraka amin'ny volamena rose toy ny peratra fifamofoana ny opal mavokely.
Opal ny afo
Tags Fire, Opal ny afo, Opal
Mookaite mavokely mavokely
Tags Boulder, Opal